Rfid Matagi, Rfid Kadhi, Rfid Wristband - Toptag
RFID Anti-kunyepedzera Labels
Welcome to Toptag
Semunhu ane ruzivo rweRFID zvigadzirwa zvigadzirwa, tinopa zvigadzirwa zvakanakisa.
BASA RAKANAKA ROKUITIRA
Toptag timu yekutengesa inogona kupa mazano ehunyanzvi pane chako chakasarudzika chinodiwa. Isu tinopa emahara sampuli yekuyedzwa kwako.
Toptag inogara ichigadzirisa mashandiro ekugadzira, kudzikisa mutengo wekugadzira, uye kugadzirisa kugona kwekugadzira, kupa vatengi mhando dzakanaka uye zvakachipa zvigadzirwa.
Nyanzvi ine ruzivo
anopfuura makore makumi maviri ekugadzira ruzivo, tsvimbo 2000, zvikwata gumi zveR & D uye makumi maviri emhando yepamusoro mitsara yekugadzira emakadhi nemategi. Toptag inozvipira muR & D, kugadzira uye kutengesa kweRFID zvigadzirwa uye RFID mhinduro.
Isu tinopa akasiyana marudzi e rfid ma tag eakasiyana application. Tinokudziridza zvigadzirwa zvitsva zveRFID zvinoenderana nezvinodiwa nevatengi ...
Vatakuri veToptag vanobatsira kuona mushe mushe uye kudzikisira kurasikirwa, uku vachivandudza manejimendi ezvitoro nekumhanyisa kumhanyisa. Passive isina kutaurirana RFID ma tag anovandudza dhata yekumhanyisa mhanyisa uye kunyatsoita, zvichiita kuti kuteedzera kuve kwakachipa-kuchishanda uku uchiwedzera kunyatso.
Inoshandisa tekinoroji yeRFID kunyatsobata machira ekushambadzira kana epachivande, zvipfeko kana mameti, kugadzirisa hesera uye kudzikisira kukanganisa kwevanhu mukuwacha uye kubhadharisa maitiro. Toptag ine hukama hwakareba neHilton, Marriot.
RFID Laundry manejimendi
Iyo isina waya yechiitiko tech yave yakajairwa pamitambo yepamusoro yenyika mimhanzi, nevateveri vachidada vakapfeka maRFID mabhandi emawoko gore rese kutenderera semabheji ekuremekedza. Toptag yaive nekubatana nemitambo mizhinji yakaita seRio festival, SnowGlobe Music Festival nezvimwe.
Mitikiti YeChiitiko & Varaidzo
Toptag ine Kubatanidza tekinoroji yepamberi yekugadzirisa ese mamiriro ehutano hwezvehutano mukati meakasiyana nharaunda yenzvimbo yehutano - manejimendi manejimendi, kuteedzera kweaseti uye mamiriro ekutarisa, chaiyo-nguva nzvimbo masevhisi, kubhadharisa uye rugare rwepfungwa.
Nemakumi emakore ezviitiko mukuvandudzwa kwesimba rekupinda kudzora mhinduro dzekuwana kwenyama uye zvine musoro, Toptag inovimbwa nemasangano nehurumende kupa zvisingaenzaniswi chengetedzo uye dziviriro mhinduro.
RFID ma tag anotendera masisitimu ekuona mota kuti dzibudiswe nemagetsi kubva pamamita kure. Mota dzinogona kuongororwa otomatiki, pamwe nemutoro wakatarwa. Vanogona kutariswa zvakare mukati zvakare nyore nyore. Nerubatsiro rwehunyanzvi, RFID inogona kupa nzira yakatendeka yekuzivisa mota dzakasiyana siyana, kudziwana kune imwe saiti kana kune imwe nharaunda mukati mesaiti, inowanzo shandiswa ETC kana manejimendi ekupaka.
Kumaka zvipfuyo neRFID kunogona kuva chishandiso chakakosha muhomwe yemurimi kuti azive mhuka yega yega pamwe nedzinza rayo neruzivo rwekurapa. Varapi vezvemhuka izvozvi vari kukurudzira kuti mhuka dzese dzemumba dziteedzwe vachishandisa RFID kuitira kuti vagadzire sisitimu yekuziva mhuka dzakarasika uye dzakawanikwa.
RFID-on-metal transponders inogona kunge iri munzvimbo dzakasiyana siyana dzekuteedzera kweaseti uye yakafara mafekitori ekushandisa. Iwo maficha akakosha ndewekuteedzera kweaseti pamaseva uye malaptop muIT data nzvimbo, maindasitiri ekugadzira mhando kutonga uye kugadzira, oiri uye gasi pombi yekugadzirisa, uye magasi masirinda, chishandiso chekutevera, kuronda nhumbi, uye yekurapa mudziyo wehunhu kudzora.
Nhasi, kunyangwe muEC nemakadhi echikwereti, makadhi eID ako, mapasipoti kana makadhi einishuwarenzi ehutano, data rakachengetwa pane akawanda maRFID machipisi, nerubatsiro rweapp yakakodzera, iyo data yemunhu inogona zvakare kuverengerwa muchivande nenjere mafoni. Makadhi eToptag eRFID anovharira anopa dziviriro yakavimbika kubva pakuverenga kusingabvumirwe kwedata muhuwandu hwe13.56 MHz.
Kambani yedu yakavambwa muna2008 nemahofisi makuru maviri ari muHong Kong neShenzhen, China. Kambani yedu yakavambwa neboka revanhu vaneshungu uye vane hunyanzvi vane hupfumi hweRFID yekutengesa uye yekugadzira ruzivo. Kambani yedu inozivikanwa mune akasiyana maRFID tag uye zvinyorwa zvine akasiyana maumbirwo uye zvigadzirwa. Mateki edu anotangira pane yakaderera frequency kuenda kune Ultra-yakakwira frequency, ayo anoshandiswa zvakanyanya muNFC munda, kubhadharisa nhare, kupinda kwekutonga, manejimendi cheni manejimendi, manejimendi manejimendi, kuchengetedza & kugadzirisa zvinhu, manejimendi manejimendi zvichingodaro.
Chikamu 1401, ZhuJiang International Center, LongXiang Avenue, LongGang District, Shenzhen, China 518172.
Akangwara kuputira shanduko yezvokurapa uye hutano kuchengetedza zvigadzirwa
Recresco inoshandisa RFID proximity alarm system mufekitori kudzikisa njodzi yekurovera pakati pevanhu nemotokari